Quark Inosimudzira Inopa Hybrid Solution Yako Bhizinesi Ekutsikisa Zvinodiwa Martech Zone
Quark yatanga yakavhenganiswa webhu application iyo inosanganisa matemplate ehunyanzvi pamwe neiyo nyowani desktop software, Quark Kukurudzira. Iyo yakanaka inonakidza modhi… dhawunorodha Windows-based application uye iwe unogona kutanga kugadzirisa uye kurodha zvako zvekushambadzira zvinhu
Kana zvishandiso zvako zvangoiswa, unogona kuita kuti zvinyorwe uye zvigoverwa munzvimbo yako kuburikidza neneti yevaparidzi. Iyo sevhisi inokutendera iwe kugadzira makadhi ekugadzwa, mabrochure, makadhi ebhizinesi, makuponi, data mapepa, maemvuropu, mapepa, tsamba yemakadhi uye maposikadhi pama templates ane hunyanzvi. Kune akawanda akati wandei matemplate pane saiti yatove - kubva kuAccounting kuenda kuVeterinary services.
Quark yakavhura sevhisi ku maprinta akazvimirira naizvozvowo freelance uye nyanzvi vagadziri. Kune iyo "Zviitire Iwe" diki kune epakati-saizi bhizinesi, iyi mhinduro inogona kuchengetedza sangano yakati rebei nguva, simba uye mari.
Ini handina kuyedza sevhisi (inongowanikwa chete Windows-yakavakirwa), asi ndingafarire kunzwa kubva kune avo vakaiyedza. Iwo epamhepo ekugadzirisa enjini uye edhita ini andakashandisa kudhinda zvinhu zvakave zvakaoma kushandisa ... iyi nzira yakasanganiswa inogona kunge iri mhinduro yakanaka kusvika online mhinduro dzinogona kubata.
Mbudzi 27, 2009 na9: 21 PM
pane here yemahara muedzo iwe yaunogona kushandisa?